Kuvaka rutsigiro Vagadziri , Suppliers - China Building rutsigiro Factory
Chikamu chetatu chemvura yekumisa screw
Product Description >>> The vertebral body type water stop screw inogona kukamurwa kuita zvikamu zvitatu: tsvimbo mbiri dzekunze uye imwe yemukati tsvimbo. Iine chimiro chakareruka uye kushandiswa kuri nyore. Uye tsvimbo yekunze inogona kushandiswazve mushure mekuparara. Mukuvaka kwakazotevera, chikamu chepakati chete che screw chinoda kutengwa, icho chine zvakanakira kudzikisa tsvina uye kuderedza mari yezvinhu; Uye kunatsiridza kushanda zvakanaka uye kongiri yekuvaka mhando. Chikamu chepakati chemukati ...
Aluminium formwork pin architectural aluminium formwork pini
Product Description >>> Product remadunhurirwa: aruminiyamu template pini, aruminiyamu template pini, aruminiyamu template pini Pin zvinhu: Q235 Pin zvinhu: Q235, 45# simbi Pini tsanangudzo: 16 * 52, 16 * 54, 15 * 125, 16 * 140 ( pini yakasimba, kutevedzera pini yakasimba) Pini yekumisikidza: 3 * 70 ribbed, 3.5 * 70 yakabhenda pini Surface kurapwa: yakasikwa ruvara, galvanized, ruvara rwakapfava Basa repini: rinoshandiswa kugadzira uye kubatana kwealuminium alloy kuvaka formwork, uye pini. anoita basa rekugadzirisa...
Aluminium die pin piece nzvimbo aruminiyamu inofa pini chidimbu
Chigadzirwa Tsananguro >>> Kugadzirwa kweiyo yakasimba jacking zvinhu kunowanzo gadzirwa nesimbi yakarukwa uye brand-nyowani kutenderera simbi Q235, uye kugadzirwa kwehollow jacking material kunowanzo gadzirwa neextruded simbi pombi. Muchokwadi, iyo tekinoroji yekugadzira yatinowanzo taura ndiyo yakasimba jacking process tekinoroji, iyo inowanzo kupatsanurwa kuita inopisa kukungurutswa uye kutonhora kutenderera. Kupisa kutenderedza ndiko kupfuudza simbi nepakati pezviyo zviri pachena kutanga, wozopfuura nepamusoro-frequency f...
Anti slide ndiro yechikafu
Chigadzirwa Tsananguro >>> Chigadzirwa chekushandisa: fisheye anti-skid ndiro inowanzo shandiswa mumamiriro ekunze akaomarara kana pamwe chete nemichina yekuvaka, senge zvivakwa zvine kusvibiswa kwemafuta kwakawanda, chando nechando, inotsvedza, kudedera uye sainzi yekutsvagisa michina nemidziyo ine mamiriro ekunze asina kunaka. mamiriro. Muzviitiko izvi, zvakakosha zvikuru kune vimbiso yekuchengetedza yevashandi. Zvigadzirwa zveAnti slip zvinongosangana nezvinodiwa izvi, izvo zvisingagone kungovimbisa kushanda kwakajairwa, asiwo e ...
Rutsigiro rwepamusoro uye rutsigiro rwepasi
Tsanangudzo Yechigadzirwa >>> Iyo scaffold yakatarwa inotaridza kuti kureba kwechigadziko chinogadziriswa uye chinogadziriswa chetsigiro screw yefuremu yerutsigiro yakazara haifanire kudarika (300) mm, uye kureba kwakaiswa mutanda wakatwasuka hakuzodarike (150) mm. Jacking, chinhu chakakosha uye chakakosha chekuvaka mukuita scaffold erection uye kushandiswa, inoita basa rakakosha. Inotamba basa repamusoro jacking uye rezasi jacking. Mazita ejacking anosiyana nenzvimbo ...
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> 1. Nhanganyaya kune inogadziriswa simbi tsigiro: Iyo inogadziriswa simbi tsigiro (simbi mbiru) inoumbwa yakaderera casing, kumusoro intubation uye inogadziriswa mudziyo. Iyo yekumusoro intubation yakadhirowewa nemakomba akaenzana akaenzana, Chikamu chepamusoro checasing chinopihwa newaya inogadziriswa sleeve, iyo inogona kuchinjika kugadzirisa akasiyana siyana ekoramu, uye kuisirwa kuri nyore uye nekukurumidza, kunyanya yakakodzera fomu rekugara. zvivakwa Supp...
Kuvaka rutsigiro, simbi tsigiro
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> 1. Nhanganyaya kune inogadziriswa simbi tsigiro: Iyo inogadziriswa simbi tsigiro (simbi mbiru) inoumbwa yakaderera casing, kumusoro intubation uye inogadziriswa mudziyo. Iyo yekumusoro intubation yakadhirowewa nemakomba akaenzana akaenzana, Chikamu chepamusoro checasing chinopihwa newaya inogadziriswa sleeve, iyo inogona kuchinjika kugadzirisa akasiyana siyana ekoramu, uye kuisirwa kuri nyore uye nekukurumidza, kunyanya yakakodzera fomu rekugara. zvivakwa Suppo...
Dhonza chidimbu stereo
Tsanangudzo Yechigadzirwa >>> Chidimbu chinopatsanurwa chinowanzo shandiswa sechishandiso chekutsigira chechimiro chezvikamu zvakamira senge mbiru dzemadziro dzinotsigirwa nesimbi diki formwork Kazhinji, maitiro ekudhonza tab chikamu che10-12 kusimbisa pakati. Imwe kana migumo yose yakasungirirwa nemashizha maduku esimbi ane maburi, ayo anosungirirwa mujoini pakati pemasimbi maviri. Maburi emashizha esimbi anowirirana nemakomba eformwork uye akabatana uye anogadziriswa neU-shaped clamp ...
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> Iyo yekuparadzanisa screw inoshandiswa kune tie pakati pemukati nekunze formwork yemadziro kutakura lateral kumanikidza uye mamwe mitoro yekongiri, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti nzvimbo pakati pemukati nekunze formwork inogona kusangana. dhizaini zvinodiwa, uye zvakare iri fulcrum yefomu uye chimiro chayo chinotsigira. Naizvozvo, kurongeka kwemabhaudhi akapatsanurwa ane simba guru pakuvimbika, kuomarara uye kusimba kwechimiro chechimiro cheScaffolding...
Aluminium template fastener
Tsanangudzo yeChigadzirwa >>> Astener kazhinji inoreva chikamu chepakati chekubatanidza chinobatanidza zvikamu zviviri, izvo zvinonyanya kushandiswa kune dhayamita yekunze muinjiniya yekuvaka Φ Nekugadzirisa kwe48mm simbi pombi scaffold, zvisungo zvakakamurwa kuita makona ekurudyi (mafasteners emuchinjiko uye anotungamira. mafasteners), zvisungo zvinotenderera (zvisungo zvinofambiswa uye zvisungo zvepasirese), butt fasteners (yakatwasuka mitsetse yekumisikidza uye yakananga fasteners), nezvimwe Zvakanakira: Kuchengetedza nguva: Tora ...
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> The turnbuckle scaffold rudzi rutsva rwe scaffold, iyo yakaunzwa kubva kuEurope muma1980s. Icho chigadzirwa chakakwidziridzwa mushure membiru buckle scaffold. Iyo inozivikanwawo se chrysanthemum disc scaffold system, plug-in disc scaffold system, vhiri disc scaffold system, buckle disc scaffold, layer frame uye Leia furemu, nekuti musimboti wekutanga wechikafu wakagadzirwa nekambani yekuGermany uye inonzi zvakare. "Leia furemu" nevanhu vari mu ...